လက်တွေ့ဓာတုဗေဒသုတေသနဌာနသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအထောက်အကူပြု သိပ္ပံနည်းကျ အသုံးချဓါတုဗေဒ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်မှန်းချက်ထားရှိ၍ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်သို့ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်သော သုတေသနလုပ်ငန်များကို နည်းပညာလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် နည်းပညာဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
လက်တွေ့ဓါတုဗေဒသုတေသနဌာန၏ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ မျှော်မှန်းချက်မှာ စက်မှုလုပ်ငန်း အထောက်အကူပြု အသုံးချဓာတုဗေဒ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်တွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းများ၊သယံဇာတများနှင့်‌စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ မှ စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး၊ ဆေးဝါး၊ အလှ ကုန်လုပ်ငန်း အထောက်အကူပြုနှင့်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်ရန်။
အသုံးချဓါတုဗေဒ သုတေသနလုပ်ငန်းများဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ၏ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် ဆည်းပေးရန်။
အရည်အသွေးပြည့်မှီသောလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများအားစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်သော နည်းပညာများကို အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ သို့နည်းပညာလွှဲပြောင်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးဘက်ဝင်အပင်အမျိုးမျိုးမှ Herbal Soap နှင့် Antiseptic Soap စမ်းသပ် ထုတ်လုပ်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း။
ပေါ့ပါးခိုင်ခံ့သော ကွန်ကရစ်တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုသည့်ပရိုတင်းကိုအခြေခံသောဖောင်းပွွစေ သည့်ဓါတ်ပစ္စည်း စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း။
အရက်ဆီထုတ်လုပ်သောစက်ရုံမှ စွန့်ပစ်ရေများကိုအသုံးပြု၍ Nannochloropsis sp. မိုက်ခရို အယ်လ်ဂျေး မွေးမြူခြင်းဖြင့်သန့်စင်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း။
ရေသန့်စင်ရာတွင် အသုံးပြုသော ဓာတ်သတ္တိကြွကာဗွန်အား အုန်းခွံနှင့်ဝါးမှ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ် ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း။
သီဟိုသရက်စေ့အခွံမှဇီဝလောင်စာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လောင်စာတောင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း သုတေ သနလုပ်ငန်း။
သဘာဝဆံပင်ပျော့ဆေး(Herbal conditioner) ထုတ်လုပ်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း။
ကြက်ဆူဆီကြမ်းမှဆာလဖိတ်တက်ကြက်ဆူဆီထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အရည်အသွေး မြှင့်တင်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း။
ပဲပုတ်စေ့ဆီကြမ်းမှဇီဝလောင်စာ(biodiesel)ထုတ်လုပ်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း။ သဘာဝအုန်းရည်နှင့်အုန်းသကာမှ seasoning powderထုတ်လုပ်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း။
အဝတ်လျှော်စက်သုံးဆပ်ပြာရည် ( Laundry Liquid Detergent ) စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း သုတေသနလုပ်ငန်း။
တိန်ကောပင်၏အသီးမှဆီထုတ်ယူခြင်းနှင့်ဂုဏ်သတ္တိနှင့်အသုံးဝင်ပုံများကိုလေ့လာခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း။ (ACRD – photos)
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက်နေ့တွင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သုတေသနနှင့်တီထွင် ဆန်းသစ်မှု ဦးစီးဌာနနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနအောက်ရှိ၊ အသေးစား နှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ SMEလုပ်ငန်းရှင်များ လိုအပ်လျက် ရှိသည့် နည်းပညာများကို ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်ရန်အတွက် "နည်းပညာဆိုင်ရာ Awareness များ Sharing ပြုလုပ်ခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ "(၃၀.၇.၂၀၁၆)"တွင် ချည်ထည်ဆိုးဆေးခိုင်မြဲခြင်း နည်းပညာ ဖြန့်ဝေခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဒေသအသီးသီးမှ SME လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ စုစုပေါင်း(၁၆၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
(၂၃- ၇- ၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ (၂၆ - ၇- ၂၀၁၈) ရက်နေ့ထိ မုံရွာမြို့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဝါးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြေရေးအသင်းနှင့် သုတေသနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ ဝါးနှင့် အခြားဒေသ ထွက်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်သည့် နည်းပညာများ စာတွေ့လက်တွေ့ ဖြန့်ဝေခြင်း အခမ်းအနားတွင်လည်း “ဝါးမီးသွေးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဝါးမီးသွေးဆပ်ပြာနှင့်ဝါးရှာလကာရည်ဆပ်ပြာပြုလုပ်သည့်နည်းပညာ”အကြောင်းကို ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၃)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနမှ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား နည်းပညာလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပယင်းခေါင်း လျော်ရည်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပယင်း scrub ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာအား ရွှေအုပ်ဆောင်း Company Limitedအားလွှဲပြောင်းပေးခဲ့၍ သီဟိုဠ်သရက်စေ့အခွံမှ ဇီ၀လောင်စာ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်လောင်စာတောင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာအားဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါသည်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာပုံဆိုင်ဘာ စီးတီး)မှ ဆဌမနှစ် BE ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ (၂၃)ဦးသည် သုတေသနှင့် တီထွင် ဆန်းသစ်မှု ဦးစီးဌာနသို့ (၂.၅.၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ (၂၉.၆.၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ Internship အလုပ်သင်ကာလ အနေဖြင့် (၈)ပတ်ကြာ လာရောက်၍လေ့လာရာတွင် ဌာနတွင်ဆောင်ရွက်နေသော သုတေသနများ အကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့အသုံးပြုမည့် စက်များအသုံးပြုပုံကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြသခဲ့ပါသည်။
Than Than Aye, Su Win Aye , Myo Myo Win , Hla Hla Htay , Phyu Phyu Win, Preparation and characterization of activated carbon from coconut shell , IJRP,Volume: 19,2019.
Than ThanAye ,Cai-Hong Shen, PhyuPhyu Win, "Simple and Eco – Friendly Fabrication of Super hydrophobic PET Foam for Oil /Water Separation" SSRG International Journal of Applied Chemistry 6.3 (2019): 86-91.
Than Than Aye, Cai-Hong Shen, Phyu Phyu Win " Superhydrophobic / Superoleophilic Cotton Fabric for Oil / Water Separation " International Journal of Recent Engineering Science 6.3(2019):26-30.
Than Than Aye, Cho Cho Mar, "A One – step Catalytic Production of Biodiesel from Waste Cooking Oil" SSRG International Journal of Chemical Engineering Research 6.3 (2019): 1-4.
Su Win Aye, Phyu Phyu Win, Investigation the Growth of Germ Algae Nannochloropsis sp. on Distillery Effluent and Its Physico – chemical Properties. Analysis, ISSN No. 2454-2024, International Journal of Technical Research & Science ( Vol2, Issue IV , May 2017 ), Paper ID : IJTRS : V2- 14-011.
Cho Cho Mar,Than Than Aye,Hla Hla Htay,Phyu Phyu Win,Production of Biomass and Lipid for Biodiesel from Nannochloropsis sp, Journal of Myanmar Academy of Technology , vol. 17 , No.1, 2017
Cho Cho Mar, Su Win Aye, Hla Hla Htay,Handling of Wastewater from Alcoholic Beverage Industry using Oleaginous Microalgae Nannochloropsis sp. for Biomass Production, Algae Research Journal,Vol 16,2016.
Cho Cho Mar, Phyu Phyu Win, Hla Hla Htay, Production of Protein Foaming Agent Used in Making Cellular Light Weight Concrete( CLWC), Journal of Myanmar Academy of Technology , Vol.16, No 1-2, 2016.
ဖုန်းနံပါတ် + ၉၅-၉-၄၅၀၀၄၉၈၆၂ ၊ +၉၅-၁-၆၆၃၂၅၀